मुस्ताङ टिपर दुर्घटना : १४ शव पठाइयो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मुस्ताङ टिपर दुर्घटना : १४ शव पठाइयो
असार २३, २०७५ भीम घिमिरे
पोखरा — मुस्ताङमा भएको टिपर दुर्घटनामा दिवंगत २० मध्ये १४ जनाको शव अन्तिम संस्कारका लागि शनिबार पोखराबाट हेलिकप्टरमा काठमाडौं, दाङ र रोल्पा पठाइएको छ ।
मजदुर बोकेको टिपर शुक्रबार उपल्लो मुस्ताङको लो घ्याकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–३ को स्याङ्बोचेमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । घटनामा १२ जना घाइते छन् । घाइते सबैलाई शुक्रबारै पोखराको मनिपाल अस्पताल ल्याइएको थियो । मृत्यु हुनेमा रोल्पाका ९, दाङका ६ र धादिङ, ओखलढुंगा, कैलाली, कपिलवस्तु र स्याङ्जाका १/१ जना छन् ।
शनिबार पोखरा विमानस्थल आइपुगेका दिवंगतका आफन्तबीच रुवाबासी चलेको थियो । बिरुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिको बा२क २२१९ नम्बर टिपरका चालक धादिङका सुजन घलान र ओखलढुंगाको चम्पादेवी गापा–२ का २० वर्षीय जीवन माझीको शव काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । रोल्पाका विभिन्न स्थान घर भएकाहरूको शव लिवाङ र दाङका ६ जनाको शव लमही पठाइएको छ । आफन्त आइपुगेका र नजिकका भेला भएका ६ जनाको शव शनिबार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको शवगृहमा राखिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैबीच मनिपाल अस्पतालमा उपचार भइरहेका घाइतेलाई शनिबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद बिडारी र प्रदेश प्रहरी प्रमुख दानसिंह बोहोरा लगायतले भेटेका छन् । उनीहरूले घाइतेको अवस्था र उपचारका विषयमा स्वास्थ्यकर्मीसँग जानकारी लिएका थिए । यसअघि मुस्ताङका प्रदेश सांसद र केही नेताहरू शुक्रबार साँझ पोखरा विमानस्थल ल्याइएका घाइतेलाई अस्पताल पुर्‍याउन पनि खटिएका थिए । घाइतेमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर र अन्यको सुधारोन्मुख रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
ट्रेड युनियन कास्कीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै घाइतेको उपचारमा सघाउन स्वास्थ्यकर्मी संघको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जिल्ला अध्यक्ष विजयराज भण्डारीले घाइतेको उपचार र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रकाशित : असार २३, २०७५ २१:३३
माग पूरा नभए मर्न तयार छु : डा.केसी
असार २३, २०७५ एलपी देवकोटा
जुम्ला — डा. गोविन्द केसीले आफ्ना माग पूरा नभए कर्णालीमै मर्न तयार रहेको बताएका छन् । स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका मागसहित अघिल्लो शनिबारदेखि आमरण अनशन बसेका केसीले कर्णालीका जनता र विद्यार्थीमाथि सरकारले खेलबाड गरिरहेको बताए ।
‘राज्यले कर्णालीका जनताको स्वास्थ्य र शिक्षामा ध्यान नदिएकाले आमनेपालीको ध्यान केन्द्रित गर्न पवित्र भूमि कर्णालीमा मर्न तयार छु,’ उनले भने, ‘सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन जस्ताको त्यस्तै र विगतमा भएका सम्झौताका आधारमा नल्याएसम्म सत्याग्रह जारी रहनेछ ।’
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आईसीयू कक्षमा अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको छ । आमरण अनशनको आठौं दिन पुग्दा उनको स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको टोलीले जनाएको छ । अहिले उनको शरीरको मासु बाउँडिने, चक्कर लाग्ने, सेतो रक्तकोष क्रमिक रूपमा घट्ने र पिसाबमा किटोन बढी देखिन थालेको चिकित्सकले जानकारी दिएका छन् ।
पिसाबमा किटोन बढी देखिएकाले आईभी फ्ल्युट दिइएको चिकित्सक टोलीका संयोजक प्रवीण गिरीले बताए । ‘डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएकाले जतिखेर जे पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सक्नेजति उपचार गरिरहेका छौं तर पाँच दिनसम्म कैदीबन्दीसरह फोहोर हलमा राखिएकाले पछि असर हुन सक्छ ।’
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न र आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन नेपाल चिकित्सक संघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्षको टोली जुम्ला पुगेको छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रा.डा. ढुण्डीराज पौडेल र सहकोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आईसीयू कक्षमा अनशनरत डा. केसीलाई भेटी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
प्रकाशित : असार २३, २०७५ २१:२९